Xaley Abaarihii 7:00pm fiidnimo wuxuu si lama filaan ah dab u qabsadey Dekadda Dabiicigaa ee Ceel-macaan Dabkaan oo Geystey Qasaaro maal balse aysan Cidna ku wax yeeloobey marka laga reebo Gubashada Guryo toban (10) ah oo ahaa Carshaan iyo Jiingado.
Dabkaan ayaa Hakad galiyey Habsami u Socodka hawlaha Dekadda inkastoo lagu guuleystey in la damiyo
Wararku waxey sheegayaan in dabkaani ka dhashey Goob Shidaalka lagu gado oo ka mid aheyd 10-ka guri ee gubtey.
Ma ahan markii ugu horeysay ee uu dab qabsado Dekadda Ceel-macaan muddo laga joogo Sanad ayey aheyd markii ay gabi ahaan Gubteen Guryahay ka Sameysan Qandalo iyo Jiingadha, Dhanka kale wararka naga soo gaaraya Degmadda Shalaambod ayaa waxey sheegayaan in uu Dab qabsadey Guri Cariish ah ay wax ku Gubteen Labo Caruurta da’doodan lagu sheegay 8 jir iyo 9 jir.
Wararka waxey sheegayaan in dabkaani ka dhashey Burjiko la dhex dhigey guriga taasoo keentey in uu Qabsado Darbiga guriga oo ah mid Dhis ah ama qoryo taasoo keentey in uu dabkii wada gaaro dhamaan Guriga.
Labadii Caruur aheyd ee uu dhaawaco kasoo gaarey Dabkaas Qabsadey Gurigooda ayaa waxaa loola Cararey Isbitaalka Marka si loogu Daweeyo.
Inta badan Dababka nuucaan ah ayaa ah ku dhaca Tuulooyinka ayadoo ay ugu wacan dhismayaasha oo ka sameysan Cariisyo iyo Baakado hadana si aad ah isugu dhaw iyo dadka tuulooyinka ku nool oo aan iska fogeyn waxyaabaha uu Dabku sida Sahalka ah u Qabsan karo